Akwụkwọ Brian Wallace na Martech Zone |
Edemede site na Brian Wallace
Brian Wallace bụ onyeisi oche nke Ugbu a, ụlọ ọrụ na-eduga infographic imewe gị n'ụlọnga dabere na Louisville, Ky. na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị na mbio obere azụmahịa na Fortune 500. Brian na-agba ọsọ a na mpaghara omume iji mee ka Louisville a ọzọ asọmpi obodo (#igbo) ma kpọọ ya 2017 Google Small Business Advisor.
Luzụ ahịa Influencer: History, Evolution, and the Future
Thursday, August 10, 2017 Mọnde, Jenụwarị 18, 2021 Brian Wallace
Ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi: nke ahụ bụ ezigbo ihe? Ebe ọ bụ na mgbasa ozi mmekọrịta ghọrọ ụzọ kachasị mma maka nkwurịta okwu maka ọtụtụ ndị laa azụ na 2004, ọtụtụ n'ime anyị enweghị ike iche n'echiche ndụ anyị na-enweghị ya. Otu ihe nke mgbasa ozi mmekọrịta gbanwere maka nke ọma bụ na ọ kwadoro onye ọ bụla ga-abụ onye a ma ama, ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala mara amara. Ruo n'oge na-adịbeghị anya, anyị aghaghị ịdabere na fim, magazin, na ihe nkiri telivishọn iji gwa anyị onye a ma ama.